I-hacker isebenzise i-Internet of Things ukubamba into yomuntu | Scrolla Izindaba
I-hacker isebenzise i-Internet of Things ukubamba into yomuntu
I-hacker ikhiye amabhande amaningana alawula i-inthanethi futhi ifuna ukukhokhelwa imali ngama-Bitcoin ukuze sivule.
“Induku yakho sekungeyami manje,” kubhala isigebengu sibhalela esinye sezisulu.
Esinye isisulu esicele ukuthi saziwe njengoRobert sithe, lo mlisa wabhalela yena efuna inkokhelo yemali ka-0.02 ama-Bitcoin ngemuva kokumazisa ukuthi ikheji lakhe “likhiyiwe”.
“Ngenhlanhla,” uRobert wabhalela esithangamini se-inthanethi ethi, “angizange ngizivalele mina lokhu ngesikhathi kwenzeka”.
Lento, ephinde ibizwe nge-Cellmate, “iyinto yokudlala” ethandwayo emphakathini we-BDSM, yize le ndaba iyisexwayiso ingafundisa amakhasimende ukucabanga kabili ngaphambi kokuthemba i-intanethi ukulawula izitho zabo zangasese.
Impela, imikhiqizo ye-Internet of Things – igama eliqonde izinto ezibonakalayo ezilawulwa ngokusetshenziswa kokuxhumana kwangasese kwe-inthanethi – kudume ngokungathembeki futhi akuphephile.
Abaningi bathi i-Internet of Things iyindawo yokumaketha i-inthanethi yokuthi izigebengu zikwazi uku-hacker.
Sethemba ukuthi izilingo nezinsizi zikaRobert kanye nokunye, zingafundisa abathengi ukubaluleka kokuphepha kwe-inthanethi.